[တရားဝင်] dr.fone - Selective က iOS မှာ Data Backup ကို & Restore
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကိုဒေတာများကို Backup ကို & Restore
iOS ကိုဒေတာများကို Flexible နှစ်မြောက်မွေးနေ့ Backup ကို & Restore
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို backup လုပ်ထားရန်မြေတပြင်လုံးကို iOS device ကိုတဦးတည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
backup လုပ်နေတဲ့ကိရိယာတစ်ခုခုကို item preview နဲ့ restore ခွင့်ပြုရန်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို backup လုပ်ထံမှသင်တို့လိုချင်တာတွေတင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ restore စဉ်အတွင်းစက်ကိရိယာများအပေါ်အဘယ်သူမျှမဒေတာအရှုံး။
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကိုဒေတာများကို Backup ကို & Restore ကိုသင်ရွေးချယ် backup လုပ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်နှင့် iOS devices တွေကို / backup လုပ်ထားဆီကနေသင်အလိုရှိသမျှကို restore ။
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကိုဒေတာများကို Backup ကို & restore သင်သည်သင်၏ iPhone နှင့် iPad ပေါ်တွင်အားလုံးနီးပါးအချက်အလက်များ၏တစ်ခုလုံး backup လုပ်ထားပြုပါ, သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းထားချင်သောဒေတာများတင်ပို့နိုင်ပါတယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိတဲ့အခါ, သငျသညျလညျးသငျခငျြတဲ့ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင့် device ကိုမှနျထကျောထောက်နောက်ခံ data တွေကို restore လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါဟာ iTunes ကိုသို့မဟုတ် iCloud အသုံးပြု. ထက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်ခုမှာနှိပ်ပါအတူ Backup လုပ်နည်း iPhone / iPad
မြေတပြင်လုံး backup လုပ်ထားအရာသာသင်တဦးတည်းကလစ်ကြာပါသည်။ သင့်ရဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်နှင့်တွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ပရိုဂရမ်ကိုသင့်ရဲ့ iPhone, iPad နဲ့ iPod touch တွင်အလိုအလျှောက် backup လုပ်ထားဒေတာမည်။ အသစ် backup ဖိုင်ကိုဟောင်းတဦးတည်း overwrite လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်အလိုရှိအခါတိုင်းသင်ဟာ backup လုပ်ထားလုပ်နိုင်ပါတယ်။
iPhone ကို Backup ကိုနှင့် restore လွယ်ကူနှစ်မြောက်မွေးနေ့
သင့်ရဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်ပြီးနောက် click တစ်ချက်နှင့်အတူ iPhone ကိုဒေတာ Backup ကိုနှင့် restore ။
iPhone ကို Backup ကိုဖိုင်များသက်တမ်းတိုးရမည်ကြမည်မဟုတ်
သငျသညျကို iPhone ရဲ့ backup လုပ်ထားနေ့စဉ်စေနိုင်သည်အပေါင်းတို့နှင့် backup ဖိုင်တွေသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်လူသစ်တွေဖြင့်အစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။
preview iPhone ကို Backup ကိုအကြောင်းအရာ
သငျသညျကောင်းစွာသင့်ရဲ့ iPhone backup လုပ်ထားစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်သင်, ဒီ iOS က backup လုပ်ထားနှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ iPhone backup ဖိုင်တွေ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို preview နဲ့ program ကို restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
iPhone ကိုသင့်ရဲ့ဒေတာများကို Overwrite ကြမည်မဟုတ် Restore
အစမ်းကြည့်ပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ iPhone, iPad က restore ရန်သင့် iPhone ရဲ့ backup ထဲမှာမဆိုကို item ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်တည်ဆဲဆိုဒေတာကိုအစားထိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင့်ရဲ့ iPhone ကိုဒေတာများတင်ပို့
သင်သည်သင်၏ data တွေကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ချင်လျှင်, သင်လည်းသင်လိုချင်တစ်ခုက HTML ဖိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူများအဖြစ်သင့်ရဲ့ iPhone backup ထဲမှာပစ္စည်းများတင်ပို့နိုင်ပါတယ်။ သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။
သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ် iPhone မှာ7Plus အား, Pro ကိုအိုင်ပက်, ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းက iPhone 4, iPad နဲ့ 1 ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်နေပါစေ, ဒီ iOS က data တွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူ iPhone, iPad နှင့် iPod touch နဲ့မော်ဒယ်များအားလုံးနှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်သည်။
ဤသည်ကို iOS backup လုပ်ထားနှင့်အစီအစဉ်ကို restore လုံးဝကိုဖတ်ရှုသာဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်ဒါမှမဟုတ် backup ဖိုင်ကိုအတွက်မဆိုဒေတာ, စောင့်ရှောက်ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို ယူ. အလေးအနက်ထားအကောင့်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲပြုလုပ်ရယူနိုင်သူကိုသာလူတစ်ဦးပါပဲ။
backup ဖိုင်တွေအဖြစ်, သင်လိုအပ်ချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတို့ကိုမဆိုထိုသူအပေါင်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှေးခယျြသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျ preview နဲ့တင်ပို့ဆိုပစ္စည်းများသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် backup ဖိုင်ကိုမှ၎င်း, HTML ကို, CSV သို့မဟုတ် vCard ဖိုင်တွေအဖြစ်သူတို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
Backup ကိုအလွယ်တကူသင့် iOS ကိရိယာများပေါ်တွင်ဒေတာကို restore ။
အဘယ်သူမျှမဒေတာ, backup လုပ်ထားကာလအတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့တင်ပို့မှုသို့မဟုတ် restore ရှိပါသည်။
iOS ကိုဒေတာများကို Backup ကို & အားလုံးကို iOS ဖုန်းများအတွက်အလုပ်လုပ် Restore
.csv, .html, ဒါမှမဟုတ် vCard အဖြစ်ကွန်ပျူတာသို့တင်ပို့အဆက်အသွယ်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ,
.csv သို့မဟုတ် .html အဖြစ်ကွန်ပျူတာသို့ပို့ကုန် WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ,
ပို့ကုန်ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းကိုမှတ်စုများ, ပြက္ခဒိန်, သတိပေးချက်များနှင့် .html အဖြစ်ကွန်ပျူတာကိုဆာဖာရီရဲ့ bookmark ။
iPhone နှင့် iPad ပေါ်တွင် Backup ကိုမှတ်စုများ3နည်းလမ်းများ
iTunes ကို Backup ကိုအဘယျသို့သနည်း
iPhone နှင့် Android ထုတ်ကုန်အပေါ် WhatsApp ကို Backup ကို Restore လုပ်နည်း
Backup ကို iCloud ဆက်သွယ်ရန်နှစ်ခုနည်းလမ်းများ
လုပ်နည်း Backup ကိုသော့ခတ် iPhone ကို7(Plus အား) / SE / 6s (Plus အား) /6ရက်နေ့ကဒေတာများ
iTunes က Restore from Backup ကိုရန်ကဘယ်လို
iPhone ကို Backup ကို Extractor: iPhone ကိုဒေတာများကို Extract နှင့် Recover
iTunes ကိုမပါဘဲ / နှင့်အတူ Backup ကို iPhone ကိုဆက်သွယ်ရန်4နည်းလမ်းများ
ဘယ်လို iPhone ကို Backup ကိုတည်နေရာကိုရှာပါနှင့်အရံသိမ်းဆည်းဖျက်ပစ်ပါရန်